HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo xaqiijisay saxiixyada Franck Kessie, iyo Andreas Christensen
March 30, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Joan Laporta ayaa u muuqday mid xaqiijiyay in kooxdu ay ogolaatay heshiisyo ay kula soo saxiixanayso Franck Kessie iyo Andreas Christensen xagaagan.
Labada ciyaaryahan ayaa lagu wadaa inay noqdaan wakiilo xor ah dhamaadka xilli ciyaareedkan, iyadoo Kessie uu diiday qandaraasyada AC Milan , waxaana lagu soo waramayaa inuu mar horeba tijaabada caafimaadka u maray Barcelona.
Dhanka kale, heshiiska Christensen ee Chelsea lama cusbooneysiin karo inta ay saaran tahay cunaqabateynta milkiilaha haatan Roman Abramovich , Laporta ayaana dhankiisa xaqiijiyay wararka sheegaya in labada ciyaaryahan ay si dhow u imaan doonaan Camp Nou.
Isagoo la hadlayay RAC1 , Laporta ayaa yiri: “Waxaan dhameystirnay labo saxiix xilli ciyaareedka soo socda. Mid waa khadka dhexe, kan kalena waa daafac dhexe, laakiin iima ogola inaan sheego magacyadooda.”
Christensen ayaa 156 kulan u saftay Chelsea tan iyo 2018 laakiin waxa uu kaliya ku soo bilowday 14 kulan oo Premier League ah xilli ciyaareedkan, halka Kessie uu shan gool ka dhaliyay 23 kulan oo Serie A ah kooxda hogaanka u haysa horyaalka ee Rossoneri xilli ciyaareedkii 2021-22.